Denmark oo bilaabeysa Sharci Qaxootiga ku saabsan oo Dowlada UK dhawaan bilowday
HomeWararka CaalamkaDenmark oo bilaabeysa Sharci Qaxootiga ku saabsan oo Dowlada UK dhawaan bilowday
April 29, 2022 Wararka Caalamka, Wararka Denmark, Wararka Maanta 0
Dhowr maalmood ka dib markii ay saxiixeen heshiis u dhexeeya Boqortooyada Ingiriiska iyo Rwanda, oo ku saabsan in magangelyo-doonka loo diro waddanka Afrika.
Danmark ayaa la sheegay in ay dib u bilowday wadahadaladii Kigali, waxaana la arki doonaa waxa Copenhagen ay diyaar u tahay inay bixiso. Ma hubo in Danmark dal ahaan ay leedahay saamayn la mid ah tan UK (inay wadahadlaan).
Mohajer News ayaa wareysatay Camille Le Couse, oo ah cilmi-baare ka tirsan machadka siyaasadda socdaalka ee Yurub, Brussels, waxayna waydiisay su’aalahan soo socda.
Heshiiskii Rwanda iyo UK ee ahaa in dadka magangalyo doonka ah loogu diro Kigali ma yahay isbedel taariikhi ah?
Heshiiskani waa mid taariikhi ah oo laba heer ah. Marka hore, sida ku cad shuruudaha, magan-galyo-doonka cusub ee UK ka yimid ayaa loo diri doonaa Rwanda, halkaas oo ay ka dalban doonaan magangalyo. Sidoo kale Rwanda ayaa samayn doonta qiimaynta galkooda. Iskaashiga noocan oo kale ah ayaa horay u jiray, sida Maraykanka oo hoos yimaada Trump iyo Guatemala. Laakin kiiskani isku mid ma aha, sababtoo ah dadkani waxa ay sii marayeen Guatemala ka hor inta aanay gaadhin Maraykanka.
Marka laga hadlayo Boqortooyada Ingiriiska, xaaladdu way ka duwan tahay. Sababtoo ah waxay u badan tahay in magangelyo-doon laga soo diray UK oo la geeyey Rwanda aysan waligood soo marin dalka, heshiiska labadan dal waa mid aan horay loo arag.
Intaa waxaa dheer, waxaan sidoo kale markhaati ka nahay kiiskan heshiis u dhexeeya waddan Yurub ah iyo waddan Afrikaan ah. Boqortooyada Midowday (UK) waxay ansixisay Axdiga Geneva (La Xiriira Xaaladda Qaxootiga), oo la aasaasay Dagaalkii Labaad ee Adduunka ka dib. Aragtida saxiixayaasha Axdiga Geneva oo ka dhigaya heshiiskan (wadan Afrikaan ah) ayaa astaan ​​ahaan aad u awood badan.